हृदयघात (Heart Attack) को बारेमा जानकारी
जुन 13, 2019 जुन 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, हृदयघात
हृदयघात अर्थात मुटुको कुनै पनि धमनीहरूमा अवरोध भई मुटुको मांसपेशीले काम गर्न नसक्ने हुन सक्छ । यो हृदयघात यदि मुटुको देब्रे मुख्य धमनीमा अवरोध भएमा प्राणघातक पनि हुन सक्छ भने साना-साना धमनीहरुको अवरोध भएर भएको हृदयघात कहिलेकाँही मानिसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ।
कहिलेकाहीँ ठूलो धमनीमा अवरोध भएमा छातीको वीच वा देब्रेतिर बेस्सरी थिचेको जस्तो दुख्छ, चिटचिट पसिना आउँछ, वाक-वाक लाग्ने र बेहोस पनि हुन सक्छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्टेरोललाई समयमा नै नियन्त्रणमा राख्न सकेमा हृदयघात कम हुनसक्छ।
यदि यस्तो लक्षण देखा परेमा तुरून्त मुटुरोग विशेषज्ञको परामर्श लिनु जरूरी छ। अधिकाशं मानिसहरु यसलाई सामान्य सोचेर घरमै बसिरहन्छन् र अन्त्यमा हृदयघात पनि हुनसक्छ। हृदयघात भइसकेपछि उपचार सहज हुँदैन। देव्रे मुख्य धमनीमा अवरोध भएमा समस्या झनै जटिल हुन्छ किनकी पहिलो हृदयघातमा नै मृत्युसम्म हुन सक्छ ।
तसर्थ वयस्कहरुले कमसेकम एक पटक आफ्नो मुटुको परीक्षण गर्नु अति आवश्यक छ। मुटुमा समस्या देखिएमा नियमित जाँच गर्नुपर्छ किनकी हालसम्म हृदयघातको मुख्य कारण थाहा छैन। तर यसका कारक तत्वहरु मात्र थाहा छ।
← भिटामिन ई र यसको उपयोगिता
लामो आयु बाँच्न के गर्नुपर्ला ? →
अक्टोबर 25, 2018 अक्टोबर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक 24